Mampitandrina momba ny loza ateraky ny fanafihan'ny Zombie Zombie ny Semalt
Ireo mpitsoa-ponenana sy ireo mpihetraketraka dia manara-maso hatrany ny fitaovam-piadiany amin'ny fikatsahana ny fiarovana amin'ny aterineto. Manararaotra ireo programa izay mametraka azy ireo an-jatony ka hatramin'ny ordinatera an'arivony. Ny hackers dia mikendry ireo fandaharana ireo mba hahafahany manafatra fitaovana maro samihafa miaraka.
Mampiasa rafitra isan-karazany izy ireo, izay antsoina hoe botnets. Ny botnets dia nomena tsiny noho ny tsindry tao anatin'ny isan'ny spam tato anatin'ny volana vitsy. Maro ny angon-drakitra momba ny angon-drakitra no voatatitra, ary ny mpikaroka momba ny fiarovana dia manahy mikasika ny fomba famonoana botnets. Izy ireo no manamboatra sy manova ny fitaovana sy ny smartphones amin'ny ordinatera, manamafy ny vokatry ny programa sy viri ratsy rehetra.
Max Bell, The Semalt Mpitarika Success Manager, dia milaza fa ny olana dia nahatonga endrika goavana, ary ny fisainany mihamitombo dia ny manjo ny manam-pahaizana IT. Izany dia mirakitra ny angon-drakitrao, mandoa vola amin'ny banky ka miditra amin'ny rafitra mifandraika amin'ny varotra.
Nilaza i Gadi Evron, manam-pahaizana momba ny fiarovana any Beyond Security, fa fotoana tena tsara hanesorana ny viriosy avo roa heny sy ambany. Ity orinasa Israeliana ity dia nahita programa iray tamin'ny taona lasa izay afaka manampy amin'ny fampitsaharana ny zombies amin'ny fitaovana ordinatera. Marina fa misy ny aretina amin'ny ordinatera marobe, ary mitombo isan'andro ny isa. Na izany aza, nanjary goavana ny herin'ny programa botnet..David Dagon, mpikaroka ao amin'ny Institute for Technology of Georgia, dia nanangana tetikasa iray mifantoka amin'ny fitantanana ireo viriosy sy botnets ao amin'ny rafitry ny ordinatera. Nilaza izy fa nandrava solosa 600 tapitrisa maneran-tany ny programa botneta.
Niely tamin'ny World Wide Web ny fandaharan'asa ratsy rehetra sy ny areti-n'ireo viriosy nanomboka tamin'ny 1987 raha toa ka nisy solosaina enina arivo isaky ny aterineto. Isaky ny mandidy ny hanimba ny fahasimbana ny mpitantana ny solosaina na mpampiasa solosaina, dia mbola mitoetra ao anatin'ny rafitra ny paty amin'ny viriosy sy botnets. Indrisy anefa fa lasa atsy ho endriky ny fanafihana toy izany, ary tena ilaintsika tokoa ny manaisotra ireo botnetsa haingana araka izay tratra. Tsy ampy ny fiarovan'ny ordinatera satria mila manam-pahaizana manokana isika izay afaka mamorona rafitra matanjaka amin'ny botnets sy ny viriosy amin'ny aterineto.
Nanazava i David Farber avy any Carnegie Mellon fa ny botnets dia mampiseho ireo fandrahonana sarotra atrehina. Mpisava lalana IT izy ary niasa tamina tetikasa maro. Raha ny filazany azy, dia iray amin'ireo loza mitatao aminy, ary izy sy ireo manam-pahaizana IT dia manahy ny amin'io olana io. Ny botnets dia miditra mora foana ny fitaovana elektronika ary manimba ny antontan-taratasy marobe. Ankoatra izany, ny viriosy sy ny botnets dia manafika haingana ny tranonkala web sy ny rafitra fitrandrahana taloha.
Hatramin'izao, ireo viriosy sy botnets dia nahitàna rafitra fiasa sy solosaina maro manerana izao tontolo izao. Firenena maro no nitatitra fa nisy nanafika ny governemanta sy ny solosaina ary nizara amin'ny fomba samihafa. Ny fomba amam-panao mahazatra indrindra dia amin'ny alàlan'ny mailaka, rakitra maimaim-poana, ary hafatra mampiahiahy momba ny media sosialy.
ShadowServer dia orinasa fiarovana amin'ny ordinatera izay miasa amin'ny programa Antivirus ary tompon'andraikitra amin'ny fanaraha-maso ny botnet activities. Nanara-maso milina efatra tapitrisa voan'ny aretina izy io ary rafitra fanaraha-maso IRC 2 000 mahery, fantatra amin'ny anarana hoe Command & Control ihany koa.
Nilaza i Serry Winkler, manam-pahaizana ao Denver fa azo atao ny manala ny loza mitatao amin'ny serasera amin'ny alalan'ny rindrambaiko sy programa sasany. Nanapa-kevitra ny hividy fitaovana elektronika maromaro hanatsarana ny fikarohana nataony izy Source .